I-OPS 75% ye-Alohol Isandla seSanitizer esosula iVenkile enkulu ye-COVID-19
Ikhaya / iimveliso / Ukusula kweSanitizer
Utywala Isandla seSanitizer
I-Benzalkonium Chloride Wipes
I-OPS yokucoceka ngesandla isula ngotywala okanye ngaphandle kotywala (i-benzalkonium chloride), amaqhekeza alikhulu acoca ukusula kwiphakheji enye. Ungaze uphinde ukhathazeke ngezandla ezimdaka kwakhona. Kukulungele ukuhlala uhlaziyekile ekuhambeni, kunye nefomula ephambili ngokucoca izandla zakho. Sula yonke into ongathanda ukuyicoca.
Iqulethe i-Aloe kunye neVitamin ye-Moisturizing.
Cleans Ukucoca kwangoko kunye nokucoca isandla.
Kukhuselekile ukusebenzisa ngaphambi kokutya nokusela.
Ing Ukomisa ngokukhawuleza, kungashiyi ntsalela inamathelayo.
Buyela kuMsebenzi weSikolo.
I-OPS yesandla seSanitizer ezisusa izandla
Iintsholongwane ezichasene ne-antibacterial wipes eza nephakeji epheleleyo yeiyunithi ezingama-100. Le mveliso ilungile,
kuba zilungile ngokwenene kukucoca izandla zakho kunye nokugcina iofisi okanye izinto zokusebenza zikwimeko efanelekileyo.
Iipesenti ezingama-99 eziyingozi zibulewe kwaye kususwe okuthile. Ngokuqinisekileyo ukhetho olunempumelelo ukuba ulujongile
Umgangatho wobungcali usula ngexabiso elikhulu. I-OPS ibonelela nge-70-75% i-Alcohol sanitizing wipes ngesandla kunye nokusula kwe-benzalkonium chloride
Ngaba ii-San Sanizer Wipes ziyasebenza kwi-Covid-19?
Ngaba uyafuna ukufumana esona sandla singasasebenziyo sokususa into ekhoyo ngoku kwintengiso?
Umele ukuba uqaphele ukuba zininzi iimveliso kangangokuba kunzima ukukhetha nje iimpazamo ezithile.
Nazi ezinye amanqaku ekufuneka uzigcine engqondweni xa ukhetha ukosula iintsholongwane.
Nokuba ufuna ntoni na xa useluhambeni okanye uhamba uhambo olude okanye kude nekhaya kwaye awukwazi Hlamba izandla zakho
ngesepha namanzi okanye ngemisebenzi eyahlukeneyo efuna iimeko ezifanelekileyo zokucoceka zombini kwinto leyo
(izixhobo zonyango, ikhitshi lokutyela njlnjl. njl njl njl nabasebenzi, ukusula izibulala-ntsholongwane ngaphandle kwamathandabuzo kokona kulungileyo.
Ezi ntlawulo zisetyenziswa ikakhulu susa zonke iintlobo zee -organic ezandleni okanye kolu hlobo lwezinto.
Xa ukhetha ezona zisusa izandla zokucoca, into yokuqala ekufuneka uyiqwalasele kukuba kuthatha ixesha elingakanani ukusula ukubulala intsholongwane
kunye nezandla okanye into eyomileyo. Sisoloko sicebisa ukukhetha ukuzisula okusebenza ngokukhawuleza kwaye kuya kuphuma ngokukhawuleza.
Kuya kuba ngumdla ukwazi ukuba ingakanani isibulala-ntsholongwane kunye nokususwa kwezinto onazo kunye nemveliso equkiweyo.
Kodwa ngaphandle kwamathandabuzo, eyona nto ibaluleke kakhulu kukujonga iichemicals eziqulathwe kukusula, ngakumbi ukuba luza kubakho
isetyenziswe ezandleni. Kungcono ukuba ungasebenzisi iipesile ezinemixube emininzi kwaye zihlala zikhetha ezona zindalo zinokwenzeka,
nangona oku kuthetha ukuyeka ukusula okunuka kamnandi kuba kubandakanya iziqholo.
Ubunjani besosula bunokuthi kwakhona buthathelwe ingqalelo, kuba kuya kuba ngumdla ukuba uyixhathisile kwaye ayizishiyi ziintsinga
okanye intsalela. Ngokungathandabuzekiyo indlela elula yokuzihlambulula nokucoca ezinye zezinto zethu okanye izixhobo
xa isepha namanzi okanye ezinye izinto ezibulala intsholongwane zingafumaneki, kodwa akufuneki zisetyenziswe rhoqo njengendalo
indlela yokucoca, kuba banokugqibela ukonakalisa ezona zilusu zibuthathaka ukuba ukhetha ukusula okunemichiza emininzi.
Kwakhona, ukuxhathisa kungadalwa kwaye ezi zisula azisayi kusebenza ekulweni nezafozi ezithile.
Ke ngoko sicebisa ukusetyenziswa kwayo okuphakathi kunye. Nanini na apho kunokwenzeka, ukukhethwa kweyona ncuthu yendalo kunokwenzeka.
Isithako esisebenzayoI-Ethyl yotywala, Amanzi ahlanjulweyo, kunye nabanye.
Inobungozi xa iginyiwe.
Sukusebenzisa njengezosula zomntwana.
Sukugungqa phantsi iToliet.
Unokutsha kakhulu. Gcina kude nomlilo okanye idangatye.
Musa ukutya okanye ukusela xa uphatha.
Ingozi ebantwini nakwizilwanyana zasekhaya.
Phakamisa itabhu ngaphezulu kwesivalo ukuze uvule.
Vula iphakheji yefilimu yokugcina umswakama ngaphambi kokusetyenziswa
Sisusa kuqala sisusa kwiziko lokuhambisa.
Vala isiciko ukuze ugcine ukufuma
I-WIpe icocekile ngale mveliso. Umoya mawume.
Kukuyalela ukuba kusulwe ii-sanitizer ngesandla? Ulwazi oluninzi, nceda Qhagamshelana nathi!
Iphepha leSanitizer lisula iphepha
Ukucinywa kwesandla esichasene ne-antibacterial
Umkhiqizo ocacileyo. Iipesenti ezili-100 ezisula ngaphakathi
Isithako I-ethyl Alcohol okanye i-benzalkonium chloride, Amanzi aSetyenzisiweyo.
yoGcino Gcina kwindawo enomoya omnandi kunye nendawo epholileyo eyomileyo
MOQ Iifutha ze-5,000
Umhla wokuzisa Malunga neVeki enye.
Nceda uqinisekise ukuba ungumntu ngokukhetha Iflegi.